आइपिएल उपाधिमा तोडिएला मुम्बईको दबदबा? च्याम्पियन बन्न यस्तो छ दिल्लीको तयारी
एजेन्सी– इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० को उपाधिका लागि मंगलबार साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्सबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। १३ औं संस्करणको आइपिएलको उक्त फाइनल खेल दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः४५ बजे शुरु हुनेछ।
आइपिएलको चार पटकको च्याम्पियन मुम्बई र पहिलोपटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको दिल्लीबिचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ। मुम्बई आइपिएल २०१३, २०१५, २०१७ र २०१९ को च्याम्पियन हो। सर्वाधिक धेरै पटक आइपिएलको उपाधि जितेको मुम्बई २०२० को उपाधि जित्दै उपाधिमा दबदबा कायम राख्ने सोचमा छ।
लिग खेलहरुमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको मुम्बई आइपिएल २०२० को बलियो टिम हो। लिगको शीर्षस्थानमा रहँदै पहिलो क्वालिफायरमा दिल्लीलाई पराजित गरेको मुम्बईले सिधै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको मुम्बईको मनोबल उच्च रहेको छ।
लिगमा दोस्रो स्थानमा रहँदै प्ले अफमा स्थान बनाएको दिल्ली पहिलो क्वालिफायरमा मुम्बईसँग पराजित भएको थियो। तर दोस्रो क्वालिफायरमा सन राइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै दिल्लीले मुम्बईसँगको उपाधि भिडन्त पक्का ग¥यो। टिममा राम्रो सन्तुलन देखिएको दिल्लीले उपाधिका मुम्बईलाई कडा टक्कर दिनेछ।
दिल्लीले आइपिएल फाइनलमा खेल्न लागेको यो पहिलोपटक हो। दिल्लीको निरन्तरको सन्तुलित प्रदर्शनका कारण आइपिएलले पहिलोपटक नयाँ च्याम्पियन पाउने आशा गरिएको छ।
के छ हालसम्मको तथ्याङ्क?
आइपिएलको १३ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा यी दुई टिम २७ खेलमा आमनेसामने भएका छन्। जसमा मुम्बई बलियो देखिएको छ। मुम्बईले २७ खेलमध्ये १५ खेलमा जित निकालेको छ भने दिल्ली १२ खेलमा विजयी भएको छ।
आइपिएल २०२० को ३ खेलमा मा दुई टोली एक अर्काविरुद्ध मैदान उत्रिएका छन्। ती तीनै खेलमा मुम्बई विजयी भएको छ। लिगको पहिलो खेलमा ५ विकेटले विजयी भएको मुम्बईले दोस्रो खेलमा ९ विकेटको जित निकाल्यो। त्यस्तै आइपिएल २०२० को पहिललो क्वालिफायरमा मुम्बई ५७ रनले विजयी भएको थियो।
तथ्याङ्कमा मुम्बईभन्दा केहि कमजोर देखिएको दिल्लीले फाइनल खेलका लागि बलियो योजना बनाएको बताइएको छ दिल्लीका प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङले खेल पहिले नै मुम्बईलाई चुनौति दिँदै दिल्लीको उत्कृष्ट खेल बाँकी रहेको बताएका छन्।
पोन्टिङले भने, ‘हामि यसपाली खुशी छौं। हाम्रो यो सजिन उत्कृष्ट रह्यो। हामी आइपिएल जित्न आएका हौं र त्यसको लागि टिम आफ्नो उच्च प्रदर्शन दिनको लागि तयार छ।’
#आइपीएल २०२० #मुम्बई #दिल्ली_क्यापिटल्स्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७ १९:२२